Lasa ireo fitaovana fampiasa ao am-piangonana: norobain’ny jiolahy ny Ekar Fenomanana Mahazoarivo | NewsMada
Lasa ireo fitaovana fampiasa ao am-piangonana: norobain’ny jiolahy ny Ekar Fenomanana Mahazoarivo
Par Taratra sur 23/09/2019
Lasibatra amin’ny halatra indray izao ny fiangonana. Niverenan’ny jilahy fanindroany ny Ekar Md Louis eny Fenomanana Mahazoarivo. Lasa tamin’izany ireo fitaovana fampiasa mandritra ny Sorona Masina.
Tsy mifidy zavatra angalarina intsony ny jiolahy, ankehitriny fa hatramin’ny zava-masina any am-piangonana aza dia lasibatra avokoa.Tamin’izany indrindra no nahafantarana fa vaky, ny alakamisy teo ny fiangonana katolika Masindahy Fenomanana etsy Mahazoarivo, lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny kalisy sy siboara ilay kalisy lehibe miloko ranombolamena ary ny tao anaty tabernakla. Araka ny nambaran’ny loharanom-baovao, ny asabotsy maraina, nisy nahatsikaritra ny fahaverezan’ireo zava-masina ireo tao amin’ny fiangonana ka avy hatrany dia nampandre ny teo anivon’ny katedraly Andohalo sy ny mpitandro filaminana. Rehefa tonga teny an-toerana ny polisy dia nandray ny fepetra rehetra mahakasika izany ka tamin’ny fanadihadiana no namantarana fa ny varavarankelim-piangonana no novakin’ireo jiolahy, nahafahany niditra ka nanaovany ny asa ratsiny. Raha ny fanazavan’ny loharanom-baovao dia efa nisy ny fangalana ny dian-tanan’ireo mpanao ratsy izay notanterahin’ny polisy ary efa misokatra ny fanadihadiana izany. Raha nanontaniana mahakasika ny raharaha anefa ny mpiambina ity fiangonana ity dia nanambara fa tsy nahita ny zava-nitranga rehetra. “ Tsy nisy nivavaka maraina mihitsy tao amin’ny fiangonana, nandritra iny herinandro iny ka ny asabotsy maraina vao tsikaritra fa nivoha ny tabernakla ary efa tsy tao intsony ny zava-masina rehetra” hoy ny mpino iray ao amin’ny fiangonana. Nohamafisiny tamin’izany fa mety tamin’ny alakamisy, hoy izy no niharan’ny fahavakisana ny fiangonana, fa izao vao nisy nahatsikaritra.
Indroa niharan’ny fahavakisana ny Ekar MD Louis Fenomanana, tamin’ity taona ity, hoy ireo mpino ao aminy. Vao volana vitsy monja, hoy izy ireo no very ny “ampli” sy ny “table de mixage” lehibe iray ao amin’ity fiangonana ity ka nofonosin’ireo jiolahy tamin’ny lamban-databatra ireto fitaovana ireto.
Miverina indray ve izany ny asan-jiolahy amin’ny famakiana fiangonana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Raha tsiahivina dia nisy tokoa ny vanim-potoana izay nahabe ny halatra lakolosim-piangonana teto Madagasikara, ary isan’ny iharan’izany asa ratsy izany matetika ny fiangonana katolika eto amintsika.